पुरुषका लागि कपाल झर्नबाट बचाउने यी हुन् प्रभावकारी उपाय पुरुषका लागि कपाल झर्नबाट बचाउने यी हुन् प्रभावकारी उपाय Canada Nepal
Sep 29 2021 | २०७८, आश्विन १३गते
२०७८, आश्विन १३गते
आज जितिया पर्व मनाइँदै, प्रधानमन्त्री देउवाद्धारा शुभकामना
भारतमा एकैदिन २९ हजार ९ सय कोरोना संक्रमित निको भए, ३ सय ७५ जनाले ज्यान गुमाए
च्याम्पियन्स लिग : एफसीसँग रियल मड्रिड पराजित
दल विभाजन व्यवस्थाविहीन अवस्थामा, अहिलेकाे अवस्थामा के पार्टी फुट्न सक्छन् ?
५० मिनेट अगाडी
मेस्सीको गोलमा पीएसजीको सानदार जित, उक्लियो शीर्षस्थानमा
कोरोना संक्रमण दर ८.३ प्रतिशत
बिक्रमबाबाले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् असोज १३ गते बुधबारको राशिफल
क्यानाडा नेपाल जेठ २० २०७८
यी रोगका लागि अचुक ओखती नास्पती, यस्ता छन् फाइदाहरु
काठमाडौं - गर्मीमा सजिलै पाइने फल हो नास्पती । प्रशस्त मात्रामा भिटामिन पाइने नास्पाति स्वादका लागि मात्रै होइन स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदाजनक छ ।
यसमा भिटामिन ए, बी, फोलिक एसिड, पोटासियम, फोस्फोरस लगायतका तत्वहरु पाइन्छ । गर्मीमा सितलता प्रदान गर्ने यस फल पत्थरी, कब्जियत लगायत धेरैको समस्या समाधान गर्छ ।
नास्पतीका फाइदाहरु यस्ता छन्
तौल नियन्त्रण - नास्पतीको सेवन गर्नाले शरीरको तौल घटाउन सहगोग पुग्छ । यसमा फाइबर बढी पाइने भएकाले यसले भोक कम गराउँछ । जसले गर्दा तौल कम हुँदै जान्छ ।
पाचन प्रणालीमा सुधार - नास्पतीको सेवनले पाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउछ । यसको सेवनले अन्य खना पचाउन सहयोग पुर्याउछ ।
कोलेस्ट्रोल कम गर्छ - नास्पतीको सेवनले कोलेस्ट्रोल कम गर्न सहयोग गर्छ । यसमा पाइने पेक्टिन र फाइबरले हाम्रो शरीरको कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ ।
कब्जियत कम गर्ने - नास्पतीको सेवनले कब्जियत कम गर्न सहयोग गर्छ । यसमा पाइने पेक्टिनले दिशालाई राम्रो बनाउछ ।
पत्थरी कम - नास्पतिमा सेवनले पथ्थरीको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छ । यसमा मेलिक नामक तत्व पाइन्छ । यसले हाम्रो शरीरमा पत्थरी हुन दिदैन । मृगौलामा रहेका फोहोरलाई बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ ।
अन्य फाइदाहरु - नास्पतीको सेवनले घाँटीको समस्या समाधान, बाझोपन हटाउन सहयोग पुर्याउने, रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्ने,छाती पोल्ने समस्याका लागि फाइदा पुग्ने,
श्रावण १८, २०७८ सोमवार २१:४४:२३ बजे : प्रकाशित
कब्जियतबाट बच्ने विज्ञका ६ टिप्स
न्युयोर्क - कब्जियत अहिले प्राय सबै मानिसको साझा स्वास्थ्य समस्या हो । कब्जियतले पेटमा केही गडबढी भएको संकेत गर्छ । सबै उमेर समूहका मानिसमा देखिने यस समस्याबाट विशेषगरी बृद्धबद्धा पीडित छन् । कब्जियतबाट बच्ने विज्ञका केही टिप्स यस प्रकार छन्ः
१ प्रशस्त पानी पिउने
पानी कब्जियतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औषधी हो । प्रशस्त पानी र तरल पर्दाथयुक्त खाना खाँदा कब्जियतबाट बच्न सकिन्छ । तर, पानीको नाममा सोडा पानी वा अन्य पेय पर्दाथ पिउनु कब्जियतको समाधान होइन ।
२ फाइबरयुक्त खाना
जौ, गहुँ, रोटीजस्ता फाइबरयुक्त खानेकुरा पोषिलो मात्र होइन यसले कब्जियतबाट पनि जोगाउँछ ।
२ फलफुल तथा सागसब्जी
ताजा फलफुल तथा सागसब्जीमा प्रशस्त फाइबर र तरल पर्दाथ हुने भएकोले हाम्रो समग्र पाचन पक्रियालाइ फाइदा गर्छ । प्रशस्त हरियो सागसब्जी र ताजा फलफुल खाँदा कब्जियत नै हुदैन ।
भिटामिन र प्रोटिनयुक्त गेडागुडी नियमित सेवन गर्दा स्वभाविक रुपमा कब्जियत देखिदैन ।
५ उखुको जुस र मह
उखुको जुस, खुदो र मह कब्जियत मुक्त गर्ने खानेकुरा हुन् । उखुको रसमा आवश्यकताअनुसार मह मिसाएर खाँदा यसले राम्रो औषधीको काम गर्छ ।
उठबसलगायतका शारीरिक व्यायायमले पनि कब्जियत समस्या अन्त्य गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।एजेन्सी
भाद्र १८, २०७८ शुक्रवार १०:४०:४७ बजे : प्रकाशित
अब डिम्ब, शुक्रकीट र भ्रुणलाई ५५ वर्षसम्म शीतभण्डारण गर्न सकिने
एजेन्सी, लण्डन - बेलायतमा मानिसको डिम्ब, शुक्रकीट र भ्रुणलाई ५५ वर्षसम्म शीतभण्डारण गर्न सकिने कानून ल्याइने भएको छ । दश वर्षसम्म भण्डारण गर्न मिल्ने विद्यमान कानूनलाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो । नयाँ कानूनले सर्वसाधारणलाइ आफ्नो परिवार कहिले सुरु गर्ने भन्ने विकल्प दिनेछ । कानूनलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भावी आमाबुवाले शुक्रकीट र भ्रुण भण्डारण गरेको १० वर्ष पूरा भएपछि प्रजनन प्रक्रिया अघि बढाउने वा भण्डारण गरिएका कोषहरू नष्ट गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।
डिम्ब, शुक्रकीट र भ्रुणको शीतभण्डारण गर्न एउटा आधुनिक चिस्यान पद्धति विकास गरिएको छ । जसअनुसार डिम्बको संरचना नबिगारी लामो समय सुरक्षित राख्न सकिनेछ ।
प्रस्तावित नयाँ कानूनले मानिसलाई सन्तान जन्माउन हतार गर्ने विद्यमान संस्कार अन्तय गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री साजिद जाबिदले भने । ‘अब मानिसमा प्रजनन स्वतन्त्रता हुनेछ ।’
मन्त्री जाबिदले भने । त्यस्तै, ब्रिटिश फर्टिलिटी सोसाइटीका अध्यक्ष डा. राज माथुरले नयाँ प्रस्तावको योजनाको स्वागत गरेका छन् । विज्ञहरुका अनुसार चाँडो डिम्ब शीतभण्डारण गर्ने महिलामा कृत्रिम गर्भाधान सफल हुन्छ ।एजेन्सी
भाद्र २२, २०७८ मंगलवार १०:००:३९ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । डिसेम्बर २०१९ मा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाभाइरसको संक्रमण अहिले विश्वभर देखिएको छ ।
विश्वभर फैलिँदा कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरियन्ट देखिएका छन् । जुन मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक सावित भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को भेरियन्ट अफ इन्ट्रेष्टमा अल्फा, बिटा, गामा र डेल्टा भेरियन्टलाई सबैभन्दा घातक मानिएको छ । नेपालमा यीमध्ये डेल्टा र अल्फा भेरियन्टको संक्रमण देखिसकिएको छ भने बिटा र गामा भेरियन्ट भित्रिन सक्ने सम्भावना अधिक छ।
चीनको वुहाननजिकै पशुपंक्षी व्यापार हुने एक बजारमा पहिलो पटक कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । उक्त भाइरस केही महिनामै विश्वभरि फैलियो । हालसम्म पनि भाइरसको प्रकोप कायमै छ । उक्त भाइरसको वैज्ञानिक नाम सार्स–कोभ–२ हो । यसको संक्रमणबाट हुने रोगलाई कोभिड–१९ भनिन्छ । भाइरसको नाम तीन शब्द कारोना, भाइरस र डिजिजसँगै सन् २०१९को संयोजनमा बनाइएको हो ।
आनुवांशिक संरचनामा आरएनए भएका भाइरसको एउटा समूहलाई वैज्ञानिकहरूले कोरोनाभाइरस नामाकरण गरे, जसको बाह्य रूप किरीट अर्थात् श्रीपेच आकारको छ । त्यसलाई नेपालीमा ’किरीटाकार विषाणु’ वा ’किरीट विषाणु’ भनिए पनि कोरोनाभाइरस सजिलै बुझिने नाम हो । अहिले यस भाइरसको विभिन्न किसिमका सयौं भेरियन्टहरू विश्वभरिनै देखापरेका छन् ।
तीमध्ये अल्फा, बिटा, गामा र डेल्टा भेरियन्टलाई सबैभन्दा घातक मानिएको छ । डब्लूएचओले भेरियन्ट अफ कन्सर्नभित्र परेका यी चार भेरिन्टलाई घातक मानेको छ । यी भेरियन्ट विश्वभरि तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ ।
डब्लुएचओको भेरियन्ट अफ इन्ट्रेष्टमा इटा (बी १.५२५), लोटा (बी.१.५२६), कप्पा (बी.१.६१७.१), जीटा (पी.२), थिटा (पी.३) लगायत छन् । जसको उद्गम मुलुक पेरु, कोलम्बिया, फिलिपिन्स, भारत तथा अमेरिका रहेका छन् ।
यस्तै बी.१.४२७, बी.१.४२९, आर १, सी.३६.३, सी.१.२ लगायतका भेरियन्टको चेतावनी डब्लूएचओले दिइसकेको छ । जसको उद्गम देश साउथ अफ्रिका, इन्डोनेसिया, रसिया, इजिप्ट लगायत छन् ।
भारतमा फैलिएको बी.१.६१७.२ कोरोनाभाइरसको प्रकारलाई नाम उच्चारण सजिलो बनाउन सञ्चारमाध्यम तथा मानिसले भारतीय भेरियन्टको नाम दिएका थिए । केही समयपछि भारतले यस नामप्रति आपत्ति जनाएकोले डेल्टा भेरियन्टका रूपमा पहिचान गरियो ।
भेरियन्टको नामाकरणका लागि ग्रीक वर्णमालाका अक्षर अल्फा, बीटा, गामाजस्ता गैरवैज्ञानिक समूह वा उच्चारण तथा छलफल गर्न सजिलो र अधिक व्यावहारिक हुने अक्षरहरू प्रयोग गर्न डब्लूएचओले सिफारिस गरेको हो ।
यस्तै बेलायतमा भेटिएको खतरनाक भेरियन्ट (बी.१.१.७) लाई अल्फा, दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको भेरियन्टलाई बिटा र ब्राजिलमा भेटिएको भेरियन्टलाई गामा नामाकरण गरियो ।अमेरिका, ब्राजिल, फिलिपिन्स र अन्य मुलुकहरूमा भेटिएका कोभिडका नयाँ भेरियन्टलाई क्रमशः एप्सिलन, जेटा, आयोटा र थेटाजस्ता नाम दिइएको छ।
नेपालमा बिटा र गामा आउन सक्ने
नेपालमा भेटिएका भेरियन्ट अफ कन्सर्नमा डेल्टा र अल्फा छन् । टेकु अस्पतालका संयोजक डा.शेर बहादुर पुनका अनुसार नेपालमा भेटिएका दुई भेरियन्टमध्ये डेल्टा सबैभन्दा बढी संक्रामक मानिन्छ। ‘तीमध्ये नेपालमा अल्फा भेरियन्टको मात्र पहिचान गर्न सकिने अवस्था छ’, पुनले न्युज कारखानासँग भने, ’भारतमा बिटा र गामा भेरियन्ट देखिएको हुनाले नेपालमा पनि यो भाइरस भित्रिने सम्भावना धेरै छ’।
यी भेरियन्ट पहिलेको स्वरूपभन्दा छिटो फैलिनुका साथै बालबालिका र युवामा बढी संक्रमण हुने पाइएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार ज्वरो आउने, झाडापखाला लाग्ने, पेट दुख्ने, श्वासप्रश्वासमा र मुटुमा समस्या लगायत यसका लक्षणहरू हुन् ।
भेरियन्ट प्राकृतिक रूपमा म्युटेन्ट भएर विकसित हुँदै जान्छ । देशको भूगोल र वातावरणले पनि भेरियन्टको प्रकृतिमा कहीँ कतै असर पार्न सक्दछ । भेरियन्टको उत्पत्तिपछि यसले एक किसिमको लहर ल्याउने र त्यस समयमा सो भेरियन्ट घातक बन्ने संयोजक पुनको भनाइ छ।
भाइरसको भेरियन्टको पहिचान गर्नु जरुरी भएकाले भाइरसको उत्परिवर्तनबारे जानकारी लिइ रोग नियन्त्रण नीति तथा प्रतिकार्य गर्न आवश्यक छ । हरेक महिना भाइरसको संक्रमण क्षमता वृद्धि भई समुदायमा फैलन सक्ने संभावना बलियो हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा हरेक महिनामा हरेक उमेर समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी १०/१५ वटा भाइरसका नमुनाको अणुवांशिक तत्वहरूको सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा अल्फा भेरियन्टको मात्र पहिचान गर्न सकिने अवस्था छ ।
आश्विन ४, २०७८ सोमवार १८:००:१२ बजे : प्रकाशित
पुदिनाका फाइदै फाइदा, छालाको समस्या समाधानदेखि तौल घटाउनेसम्म
काठमाडौं - औषधीय गुणले भरीपुर्ण पुदिना तपाई हाम्रै घर वरीपरी सजिलै पाइन्छ । पुदिनाको सेबनले हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै नै फाइदा गर्छ । बहुउपयोगी पुदिना कहिलेकाही करेसाबारीमा त्यसै पनि उम्रिरहेको देख्छौ ।
तर पुदिना घर वरीपरी रोप्नु धेरै राम्रो हुन्छ । पुदिनाको पातमा विभिन्न रोग निको पार्ने क्षमता हुन्छ । यसको सेवनले खाना पचाउन सहयोग गर्ने देखी तौल घटाउने लगायतका विभिन्न उपयोगि कार्य गर्छ । यदि तपाईलाई थकान भइरहेको छ भने पनि यसको सेवनले आराम मिल्छ ।
पुदिनामा प्रशस्त भिटामिन सी हुन्छ । यसले हात, खुट्टा र जोर्नी दुख्ने समस्याबाट टाढा राख्छ । बदामको तेलसंग पुदिनाको केही थोपा मिसाएर मालिस गरेमा यस्तो समस्या ठिक हुन्छ । पुदिनाले मौसमी एलर्जीबाट पनि बचाँउछ । यदि टाउको दुखेको छ भने यसको पात पिसेर निधारमा लगाएमा ठिक हुन्छ । पुदिनाको प्रयोगले छालाको संक्रमण, दाग तथा डण्डीफोर पनि हट्छ ।
गिँजा सुन्निने समस्या छ भने दिनहुँ पुदिना चपाएर खाएमा यो सजिलै ठिक हुँदै जान्छ । स्मरणशक्ति कमजोर भएमा पनि यसको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ । बान्ताको समस्या पनि पुदिनाले समाधान गर्छ ।
पुदिनाको पत्तालाई कागतीको रसमा मिसाएर खाएमा बान्ता कम हुन्छ अर्थात बन्ता नै हुदैन । यसमा रस र मह मिलाएर खाएमा न्यूमोनियाका बिरामीलाई राम्रो हुन्छ । यदि तपाइलाई ग्याष्ट्रिक छ भने पनि तुलसी, कालो मरिचसंग पुदिना मिसाएर खाएमा ठिक हुन्छ ।
यदि बालबालिकालाई झाडापखाला लागेको छ भने दूधमा पुदिनाको पात उमालेर २ चम्चा २ ३ पटक खाएका ठिक हुन्छ । पुदीनाको नियमित प्रयोगले दमका बिरामीलाई पनि राम्रो हुन्छ । यसको पात मुखमा राखेमा श्वासको दुर्गन्ध पनि हराउछ ।
आश्विन ५, २०७८ मंगलवार २१:०७:०२ बजे : प्रकाशित
मौसमी फ्लु बढ्दो क्रममा, कोरोनासँग लक्षण कसरी छुट्टाउने ?
कोभिड महामारीबीच पछिल्लो समय नेपालमा मौसमी फ्लुको समस्या बढेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सरकारी प्रणालीमा फ्लु असामान्य वृद्धि भएको नदेखिएको जनाएको छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले भन्छन्: "तर छिटफुट केसहरु रिपोर्ट भइरहेका छन्। साना बालबालिकाहरू घ्यारघ्यार गराउने भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको सूचना छ।"
मौसमी फ्लु प्रति सर्वसाधारणहरूले पहिले त्यति ध्यान दिने नगरेको भए पनि कोभिडका कारण मानिसहरू गम्भीर हुन थालेको बताइएको छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएकाले सर्वसाधारणहरू बढी त्रसित भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
नेपालमा मौसमी फ्लु कुन समयमा बढ्छ?
हालको मौसममा नियमित रूपमा नेपालमा मौसमी फ्लु देखिने हुँदा आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको पौडेल बताउँछन्। तर सर्वसाधारणहरू सचेत भने रहनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार नेपालमा फेब्रुअरी - मार्च महिना र जुलाईदेखि सेप्टेम्बर महिनामा फ्लुबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्ने गरेको पाइन्छ।
"अझ तुलना गर्ने हो भने त यो जुलाई - अगस्टतिर बढी हुन्छ," उनले भने।गत फेब्रुअरी - मार्च महिनातिर अस्पताल आएकाहरूले फ्लुका कारण हप्तामै दुई-तीन पटकसम्म कोभिड परीक्षण गरेको पाइएको उनले जानकारी दिए।
काठमाण्डू मात्र नभएर भरतपुर र पोखरा लगायतका सहरहरूमा पनि फ्लुबाट बिरामी परेकाहरूको सङ्ख्या बढेको पाइएको उनले बताए।
"तीन-चार हप्ता अघिसम्म त अलि धेरै नै तथ्याङ्क देखिन्छ। नेपालभरि हप्तामा १५० भन्दा बढी पुष्टि भएको देख्छु," डा. पुनले भने। "पछिल्लो दुई हप्तादेखि भने अलि तल ओर्लिएको देखिन्छ।"
नेपालमा देखा परेका मौसमी फ्लु के हुन्?
डा. पुनका अनुसार नेपालमा सामान्यता इन्फलुएन्जा ए बढी फैलिन्छ भने इन्फ्लुएन्जा बी तुलनात्मक रूपमा कम फैलिन्छ। टाइप ए इन्फ्लुएन्जाले महामारी जस्तै गरी फैलिन सक्ने भए पनि टाइप बीले भने सामान्यता त्यस्तो अवस्था सृजना नगराउने उनको भनाइ छ।
"तर पछिल्लो दुई हप्तामा चाहिँ फ्लु बीले अग्रता लिइरहेको देखिन्छ," उनले भने।"बीले मेरै चिनेको कतिपय एकदमै थला परेको पाएँ। उहाँहरू बरु कोभिड लाग्दा यस्तो परेको थिइएन, यो कडा भयो भन्छन्।''
फ्लुको लक्षण कति कडा हुन्छ भन्ने विषयमा सामान्यतया चिकित्सकहरूले टाइप एलाई बढी कडा मान्ने गरेको भए पनि टाइप बी पनि उत्तिकै कडा देखिएको र पछिल्लो दुई हप्तामा त्यो झन् "आक्रामक भएर गएको" देखिएको उनले जानकारी दिए।
पछिल्लो तथ्याङ्क अस्पताल आउनेहरूले गरेको परीक्षणमा आधारित रहेको तर त्यसले समुदायमा फ्लु प्रशस्त छ भन्ने अनुमान गर्ने सकिने उनको भनाइ छ।
टाइप ए र बीमा के फरक हुन्छ?
चिकित्सकहरूका अनुसार दुवै फ्लुमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने र कसैलाई पखाला लाग्ने जस्ता लक्षण देखिन्छ। तर बर्ड फ्लु, स्वाइन फ्लु र हङ्कङ फ्लु जस्ता सङ्क्रमणका लक्षण कडा हुने उनको भनाइ छ। यी सबै टाइप ए अन्तर्गत पर्छन्।
इन्फ्लुएन्जा बी अन्तर्गत चाहिँ दुई वटा प्रकार फ्लु छुट्टाइएको हुन्छ। ती दुई प्रकार यामागाटा र भिक्टोरिया हुन्।नेपालमा भिक्टोरिया बढी देखिने गरेको पुनले जानकारी दिए।
पछिल्लो समयमा भने यी दुवै प्रकार भित्र नपर्ने टाइप बीको अर्को खाले इन्फ्लुएन्जा नेपालमा देखिएको उनको बुझाइ छ।त्यो नयाँ प्रकारको फ्लुले कडा लक्षण उत्पन्न गराइरहेको हो वा अरू नै केही हो भन्ने कुरा भने आफूले भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
फ्लु कि कोभिड आफै थाहा पाउन सकिन्छ?
चिकित्सकहरू त्यस्तो गर्न सहज नरहेको बताउँछन्। यसका लागि चिकित्सककै सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। कोभिड वा मौसमी फ्लु के हो भन्ने कुरा छुट्टाउन चिकित्सकहरूलाई समेत सहज नहुने बताइन्छ।
त्यसै कारण सङ्क्रमण वा लक्षण भएका व्यक्तिहरूले कोभिडका साथै फ्लुको पनि परीक्षण गर्दा राम्रो हुने डा. पुन बताउँछन्।''यो दुइटाको उपचार र परामर्श बिलकुल फरक हुन्छ,'' उनले भने।
सामान्यतया स्वाद र गन्ध हराएको अवस्थामा फ्लुको लक्षण भएका व्यक्तिलाई कोभिड भएको हुन सक्ने रूपमा हेरिने गरेको चिकित्साहरू बताउँछन्।
तर कोभिड लागेका अधिकांशमा देखिने यस्तो लक्षण सबैमा भने नदेखिने डा. पुनको भनाइ छ।फ्लु लागेका बेला नाक बन्द भएका कतिपय बिरामीहरूमा गन्ध हराउने वा गन्ध नआउने हुन सक्ने डा. पौडेल बताउँछन्।
त्यसकारण पनि परीक्षण गर्नु उचित रहेको चिकित्सकहरूको मत छ। ज्वरो बढी रहे वा सास फेर्न गाह्रो भए बिरामी अस्पताल जानुपर्ने डा. पौडेल सुझाउँछन्।
फ्लु कति घातक हुन्छ?
नेपालमा मौसमी रुघाखोकीलाई सामान्य रूपमा लिइने गरेको कुरा चिकित्सकहरू पनि स्वीकार्छन्। केही दिन आराम, आहारको सन्तुलन र न्यानो गरेर बस्दा मौसमी फ्लु आफै निको हुने अनुभव धेरैले गर्ने गरेका छन्।
तर बिरामी हुने क्रम लामो समयसम्म चल्यो वा थप जटिल अवस्था हुँदै गयो भने चिकित्सकहरूको सम्पर्कमा जानुपर्ने हुन्छ। निमोनियादेखि अन्य अङ्गमा प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा मौसमी फ्लुलाई कम आँक्न नहुने बताइन्छ।
''चार पाँच दिन घरमै झोलिलो कुरा खाएर बस्न सकिन्छ। तर निरन्तर लक्षण देखियो वा सो लक्षण थप जटिल हुन थाल्यो भने चिकित्सकको सम्पर्कमा जानुपर्ने हुन्छ,'' डा. पौडेलले भने।
कोभिड महामारीकाबीच सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर परिवारसँगै बस्न सकिने उनको भनाइ छ। "हेलमेल भने धेरै गर्न हुँदैन।"मौसमी फ्लुबाट ग्रसित व्यक्तिले प्रशस्त पानी पिउनुपर्ने र ज्वरो आएको अवस्थामा सिटामोल खान सक्ने पौडेल बताउँछन्।
कुन उमेरका मानिसमा बढी जोखिम छ?
यसको उच्च जोखिममा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। बालबालिका पनि यसबाट प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। र यो विषय मानिसको रोगप्रतिरोधी क्षमतासँग सम्बन्धित छ।
एक अध्ययनले उष्ण क्षेत्रमा पर्ने देशहरूमा वर्षैभरि मौसमी फ्लु देखिने गरेको देखाएको विज्ञहरू बताउँछन्। समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
आश्विन ९, २०७८ शनिवार ०८:५०:०१ बजे : प्रकाशित